ပျို့ချင်ချင် အန်ချင်ချင် ဖြစ်နေသူများအတွက် အကူအညီ ~ ဆုံနေကြ
ပျို့ချင်ချင် အန်ချင်ချင် ဖြစ်နေသူများအတွက် အကူအညီ
Friday, March 16, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
Posted in: သရော်
ရန်ကုန်မြို့ပေါ် လေးပိုင်းပိုင်း၍ မီးအလှည့်ကျ ပေးတေ...
သံချပ်များဖြင့် NLD မဲဆွယ်
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များ မရမ်းကုန်း အမျိုးသားဒီမ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုနိုင်ငံရေးအတွက် သာသနာနယ်မြေ အ...
ပဲခူးတိုင်း မဲဆန္ဒတခုမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင...
ရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလ ပါတီတချို့သဘောထား ( အသံဖိုင် )...
ABSDF နဲ့ အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ ရက်ရွှေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၀ါးသိင်္ခရွာသို့ ညနေ ၆နာရီ ၄၅မ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စည်း...
ရွေးကောက်ပွဲသတင်းများ အန်အယ်လ်ဒီ တိုက်ရိုက် ထုတ်ပြ...
ရွေးကောက်ပွဲအကြိုအခြေအနေ လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိ
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇဗ္မူသီရိမြို့နယ်ရှိ စည်ပင်...
နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုံတွင် မဲစာရင်းဖျောက်မှုများ ဖြစ်...
Envoy ဂျာနယ် လေးဖြူကို တောင်းပန်
သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထ...
AYA Q-Remit Money Transfer( လွှဲငွေပေးပို့ခြင်း နှ...
မြန်မာနိုင်ငံ မှ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိကဘ...
မြန်မာစာနယ်ဇင်း သမဂ္ဂ (Myanmar Journalists Union) ဖ...
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများ အသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးေ...
ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံနှင့် သင်ခန်းစာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် ပဏာမရွေးချယ...
MRTVက ပြသသွားသော မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မ...
ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ၂၇ ရက်နေ့ အညာဒေသခြောက်မြိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တိုင်းမေးေ...
ABSDF မြောက်ပိုင်းကိစ္စ ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် (...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာမှကြီးကြပ်ပေးရန် နှု...
၈၈ က ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်မယ်
မီဒီယာကို ဝေဖန်ထားတဲ့ ဌာနတွင်းပေးစာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်
သတင်းဖတ်ပြီး .. တစ်ယောက်ထဲ ရယ်ရတာ အားမရလို့ဗျာ.. အ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံ TIME မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံး...
တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပမည့်ရက် ...
မဖြစ်ထွန်းတဲ့ ကြက်ဆူစိုက်ခင်းအစား ပဲစင်းငုံ စိုက်ပ...
ရေညှိဆေးပြားထုတ်ဖို့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက စစ်ကိုင်းတို...
“၀န်ကြီးများရုံးအတွင်း ဓာတ်ပုံဝင်ရိုက်သော အစ္စရေးနိ...
ပုသိမ်သု စက်လှေ တိမ်းမှောက်နစ်မြုပ်
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကို သမ္မတဦ...
သတင်း တိုတို ထွာထွာ များစုစည်းမှု
DVB - Irrawaddy - BNI - Joint Statement( အစိုးရ မီ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အပါအ၀င် မည်သူမဆို အများနှင့...
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက The Voice ဂျာနယ်မှ ထုတ်ဝေသူ၊ ...
ခေါင်းမာဂိုဏ်းသား မဟုတ်ဟု ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း ပြေ...
ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကြီးရဲ့ မဲဆွယ်နည်း
မဲဘယ်လိုခိုး၊ ဘယ်လိုလိမ်ကြသလဲ (၁)
အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်...
ညောင်မြစ်တူးရင် ပုတ်သင်ဥတွေ ပေါ်မယ်
﻿ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည့် ဦးစိုင်းအောင်လှနေအိမ်သို့ ...
မြစ်ကြီးနားမြို့ တန်ဖဲကျေးရွာရှိ ဒေသခံများကို မတ်လ...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ခရီးသွားများအတွက် E-v...
အဂတိ လိုက်စားမှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် အဂတိလိ...
တပ်မတော်၏ အမိန့်အောက်တွင် ပြာပုံဖြစ်ခဲ့သည့် ဆုံပွိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) ခရီးစဥ...
ပဋိပက္ခကာလမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုသတင်း ထုတ်ပြန်
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့က ...
အဓိဌာန် ရေစဉ်နဲ့ ရောဂါကုတဲ့ ဆရာလေး ဒေါ်သုနန္ဒာ
ကြံ့ဖွံ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်...
တောင်ဥက္ကလာ ၄ ရပ်ကွက်မီးလောင်မှု.
ကော့မှူးမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာန တာဝန်ခံရဲ့အမြတ်တေ...
ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ဆန္ဒမဲအတွက် လိမ်လည်မှုများ ပြုလုပ...
သတင်းသမားများအပေါ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မပြုရန် ထုတ်ပြ...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပ...
မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှမ်းပြည်နယ်မြော...
မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနှင့် ဦးသိန်းစိန်ေ...
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် (University of Hong Kong) ကဒေါ်ေ...
ဒေါ်ခင်ကြည် နေရာမှ သရုပ်ဆောင်ရန် သရုပ်ဆောင်သစ် ဖိတ်...
ဦးတေဇရဲ့သားအကြီးနာမည် ဥရောပပိတ်ဆို့စာရင်းထဲက ပယ်ဖ...
ပျို့ချင်ချင် အန်ချင်ချင် ဖြစ်နေသူများအတွက် အကူအညီ...
၀န်ကြီးဋ္ဌာနမှ ဂျာနယ်သို့ တရားစွဲလာလျှင် အထောက်အထာြး...
ဆယ်တန်းဖြေဆိုချိန် တိုးတိုးတိတ်တိတ် မဲဆွယ်ကြမည်
မတ် ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကျပ်ငါးသိန်းတန် CDMA 800 MHz...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပင်လယ်နယ်နိမိတ်သစ်ကို ကုလသမဂ္ဂတ...
အငြင်းပွား ကျွန်း အမှု မှာ ဘင်္ဂလား ဒေရှ် အနိုင်ရ
လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ အပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းတချို့ကို ဖျက်သိ...
တောင်ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး (အများ...